Nguva dzekuderera muBitcoin, nguva yekudyara? | Gadget nhau
Nguva dzekuderera muBitcoin, nguva yekudyara?
Mushure mekukwira nekudzika kwese kwakaperekedza hupenyu hwecryptocurrensis munhoroondo yayo yese, varimi vako venguva dzose vanenge vatove vanopfuura kushandiswa kune aya mamiriro ane nyonganiso umo kuongororwa kwemari yemagetsi kunochinja nehusiku.
Asi izvo zvisiri zvechokwadi ndezvekuti, kune vamwe vazhinji, maitiro aya anoramba ari rudzi rwechikonzero nei usingatange tengesa Bitcoin neye online broker kana pasi peimwe nzira.
Uye ndozvazvinoitika madonhwe erudzi urwu mukuyera kweBTC uye mamwe ma cryptocurrencies, mazhinji haamire kuona ichi sechimwe chikonzero chekusadyara mazviri. Asi zvinongotora wongororo diki yeiyi ichangopera slump - pamwe nezvimwe zvakapfuura - kuisa aya marudzi ezviitiko mune mamiriro. Zvakare kuti uone izvo, pamwe, ivo havagone chete kuve chinhu chakajairika uye nei pasina munhu anofanirwa kudzoka pasi, asi zvakare yakanaka nguva yekudyara.
Tevere, isu tichaongorora iyi nyaya tichifunga, hongu, kuti hapana kumbobvira paine nguva yakanaka yekudyara mumakristcheni, asi nzira imwe chete yekuzviita: nokungwarira, kudzidza kwakawanda uye kugara uchifunga nezve njodzi zhinji.
1 Kudonha kuchangobva kuitika
2 Mienzaniso yapfuura
Kudonha kuchangobva kuitika
Kubva kutanga kwe BTC mutengo kudzoreredza muna Chivabvu 2019 Izvo hazvina kuonekwa senge yakaderera kukosha senge iyo mari yaSatoshi Nakamoto yakaratidza mavhiki apfuura. Sezvakataurwa neyemari nhau webhusaiti Bloomberg, huwandu hwemadhora mazana matanhatu nemazana mashanu pachiyero icho Bitcoin chakaratidza musi waZvita 6.500 yaive mutsara wayo mutsva wekutsigira uye kunyange dzimwe nyanzvi dzakataura kuti mutengo unogona kudonha kusvika pamadhora zviuru zvina.
Sekureva kwenyanzvi dzakataurwa neshanduro yepamhepo yeyiyi svikiro, kurasikirwa mukukosheswa kweiyo cryptocurrency huru kwaigona kuve kwakakonzerwa neiyo kurwiswa nezviremera zveChinese pamhando ipi neipi yekubiridzira ine chekuita nemari yemadhora, iko kugara kuripo kwekuba uye hacks emari yemadhora uye kushaya chivimbo chekuti zvinhu izvi zvinotsamwisa muvatengesi vakuru. Uye zvakadaro, kunyangwe paine zvese izvi, zvinoitawo kufunga kuti uku hakuzove iko kwekupedzisira kuwa. Nekuti, pamwe, pachave nekuporeswa. Sezvo zvakatoitika kakawanda.
Bitcoin mutengo wakatorwa kusvika Zvita 2019
Iko kukosha kwenhoroondo kweBitcoin -Uye kubva paruoko rwake rweyakasara yemari yemadhora- iri gomo renzvimbo yemakomo nemipata iyo inoratidza sechisina basa chii zvakajairika mumhando iyi yemidziyo. Yekutanga yezvikanganiso izvi inogona kuwanikwa mumazuva ekutanga eBitcoin, apo zita iri raive risingareve zvakanyanya, muzhizha ra2011. Panguva iyoyo, BTC yakasvika pakukosheswa nemadhora anodarika makumi maviri pachikamu chimwe mushure mekudhura zvishoma kudarika dhora mwedzi mishoma yapfuura. Nekudaro, pamberi pekutendeuka kwegore, iyo cryptocurrency yakanga yadzoka pasi kusvika kumadhora maviri.
Zvakare, zhizha rinotevera zvakare rakaratidza kutanga kwepamusoro. Pamadhora matanhatu munaJune 2012, Bitcoin yakasvika padhuze nechuru munaNovember 1.000 ... kusvikira yadonha pakati pa2013 kusvika madhora mazana maviri.
Asi zvakanakisa zvaive zvichiri kuuya. Mukutanga kwegore ra2017, chikamu cheBTC chinodhura padyo neUS $ 1.000 20.000 Pakupera kwegore rimwe chete, mutengo wayo waive pedyo ne3.000. Nguva yekupenga muBTC yakatanga. Gore rakatevera rakawira pasi pe12.000. Hafu yegore gare gare yaive pedyo ne16. Musi waZvita 6.500 ndaive, zvakare, mumupata. Mumupata weXNUMX.
Sese sekuona kwatakaita, hapana mupata kana nhongonya munhoroondo yeBitcoin yanga isingadzoreke. Iyo mitengo inoderera nekukwira zvisingatarisirwi uye hapana munhu, kana chero munhu, anogona kuzvitarisira. Saka, zvinogona here kunzi uyu mupata mutsva inguva yakaipa yekudyara? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti kwete. Nei zvingave zvakadaro, nekuti hapana anoziva kana zvichizoramba zvichidonha zvisingaite.
Kana pamwe, ndiani anoziva, izvozvi tiri kunzvimbo yakaderera mumupata. Uye zvese zvasara kubva zvino kusimudzira kutsva. Tichaona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Nguva dzekuderera muBitcoin, nguva yekudyara?
Apple inonyora patent yeTouch ID pachiratidziri
Bone conduction mahedhifoni: AfterShokz Aeropex [Ongorora]